Gloomy Clouds Awaits for Myanmar's Tourism Sector | Myanmar Business Today
Home Business Gloomy Clouds Awaits for Myanmar’s Tourism Sector
Gloomy Clouds Awaits for Myanmar’s Tourism Sector
The Ministry of Hotels and Tourism publishedaReport of the COVID-19 Impact on Myanmar’s Tourism Sector today. The survey was based on the data provided by the Department of Immigration and data collected in popular destinations across the country.
The report showsasignificant drop in every aspect of the country’s tourism sector. The number of visitors into the country from January to May unsurprisingly dropped by 55 percent withatotal number of 832,094 visitors compared 1,842,315 in the same period last year.
Revenue from international air travel was only $170.314 million until May compared to $365.071 million during the same period last year. Domestic air travel showed the same reading with $53.223 million until May compared to $114.085 million last year.
All sectors related to tourism such as air travel, hotels, food and beverage, entertainment, and shopping, share the same revenue drop: 53 percent. Revenue from tourist expenditure declined by 55 percent.
Hotels and motels across the country employed 92,519 staff before the pandemic, of which 22,709 lost their jobs during the COVID-19. KTV, SPA, and other side businesses of hotels and motels reduced by 56 from 182, which representsa76 percent decrease.
The number of tour companies partnered with hotels and motels dwindled to 743 from 1,448 before the pandemic. Tour companies, who answered the survey, also laid off 19 percent of their staff, reducing to 1,187 from 1,470.
The report emphasized the gloomy clouds for the country’s tourism sector in the remaining months of 2020 and suggested the government to introduce measures such as tax relief, low-interest loans, and stimulus package for SMEs such as street sellers and handicraft workshops as well as creating jobs for people related to the tourism industry.
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခရီးသွားကဏ္ဍအပေါ် Covid-19 ၏ သက်ရောက်မှုများ စစ်တမ်းကို ယနေ့ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ စစ်တမ်းမှာ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနက ပံ့ပိုးသည့်အချက်အလက်များ၊ နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ခရီးစဥ်ဒေသများမှ ကောက်ယူရရှိသော အချက်အလက်များကို အခြေခံကာ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ခရီးသွားကဏ္ဍရှိ နယ်ပယ်တိုင်းတွင် သိသိသာသာ ကျဆင်းမှုများရှိနေကြောင်း စစ်တမ်း က ဆိုသည်။ ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ မေလအထိ နိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လည်ပတ်သည့် ခရီးသည်အရေအတွက်မှာ ယခင်နှစ်ကာလတူနှင့် ယှဥ်လျှင် ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းမျှ ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။ ယခုနှစ် မေလအထိ ခရီးသည် စုစုပေါင်း ၈၃၂၀၉၄ ဦးသာ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ယမန်နှစ်က ၁၈၄၂၃၁၅ ဦး ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံတကာ လေကြောင်းခရီးသွားလာမှုမှ ရရှိသော ဝင်ငွေမှာလည်း မေလအထိ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၇၀ သန်းကျော်သာ ရရှိခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၆၅ သန်း ရရှိခဲ့သည်။ ပြည်တွင်းလေကြောင်းခရီးသွားလာမှုမှ ဝင်ငွေ ရရှိမှုမှာလည်း ယခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၃ဒသမ ၂၂၃ သန်းသာရရှိခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁၄ ဒသမ ၀၈၅ သန်းရရှိခဲ့သည်။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် စက်စပ်နေသော လုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် လေကြောင်းခရီးသွားလာမှု၊ ဟိုတယ်နှင့် တည်းခိုခန်းများ၊ အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာ၊ ဖျော်ဖြေရေး၊ ဈေးဝယ်ခြင်းစသည့် ကဏ္ဍများမှာလည်း ဝင်ငွေရရှိမှုသည် ၅၃ ရာခိုင်နှုန်းစီ ကျဆင်းနေသည်။ ခရီးသည်များ၏ ငွေကြေးသုံးစွဲမှုမှ ဝင်ငွေမှာမူ ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းနေသည်။
နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ဟိုတယ်နှင့် တည်းခိုခန်းများမှာလည်း COVID-19 မတိုင်မီက ဝန်ထမ်းပေါင်း ၉၂၅၁၉ ဦးရှိခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အနက် ၂၂၀၀၀ ကျော်မှာ COVID-19 ကာလအတွင်း အလုပ်အကိုင်များ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ဟိုတယ်နှင့် တည်းခိုခန်းများ၏ ဆက်စပ်လုပ်ငန်းဖြစ်သည့် KTV၊ SPA နှင့် အခြားလုပ်ငန်း အရေအတွက်မှာလည်း ယခင်က ၁၈၂ ခုရှိခဲ့ရာမှ ယခုအခါ ၅၆ ခုသာ ရှိတော့ပြီး ၇၆ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။
ဟိုတယ်၊ တည်ခိုခန်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများမှာလည်း COVID-19 မတိုင်မီက ၁၄၄၈ ခုရှိခဲ့ရာမှာ ယခုအခါ ၇၄၃ ခုသာရှိတော့သည်။ ထို့အပြင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများမှာ ၎င်းတို့၏ ဝန်ထမ်းများအနက် ၁၉ ရာခိုင်နှုန်းကို အလုပ်မှ ရပ်နားခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ် လက်ကျန်လများတွက် ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် အခက်အခဲများ ကြုံနိုင်ကြောင်း စစ်တမ်းက ထောက်ပြထားပြီး အစိုးရအနေဖြင့် အခွန်လျှော့ပေးခြင်း၊ အတိုးနည်းနည်းဖြင့် ချေးငွေရရှိအောင် ဆော်ငရွက်ပေးခြင်း၊ အသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းများကို ရပ်တည်နိုင်အောင်ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးပေးခြင်းများ ပြုလုပ်သင့်ကြောင်း အကြံပြုထားသည်။
အစိုးရအနေဖြင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို ပြန်လည်စတင်ပါက ပြည်တွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် စတင်ရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးက ဆိုထားသည်။ ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ‘ခရီးသွားလုပ်ငန်း မဟာဗျူဟာလမ်းပြမြေပုံ”ကို ချမှတ်ထားပြီး ယင်းလမ်းပြမြေပုံတွင် COVID-19 အလွန်ကာအတွက် ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ရေး၊ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းဟူသော အဆင့်သုံးဆင့် ပါဝင်သည်။
Previous articleYoma and Mastercard partner to enhance e-commerce
Next articleCOVID-19: Economic Impact on Myanmar & Thailand and 2020-2021 Business Forecast